De Gea oo wali ku adkeysanaya codsigii uu hor dhigay Manchester United, si uu u sii joogo garoonka Old Trafford – Gool FM
(England) 28 Maarso 2019. Goolhayaha kooxda Manchester United David de Gea ayaa wali halkiisa kasii wada inuu ku adkeeyo maamulka Red Devils, arinta ku aadan kordhinta heshiiska cusub uu ku sii joogayo garoonka Old Trafford.
David de Gea ayaa heshiiska uu ku joogo kooxda Manchester United wuxuu dhacayaa xili ciyaareedka soo aadan, sidaas darteed saraakiisha Red Devils ayaa waxay ku howlan yihiin sida ay ugu qal qaalin lahaayeen laacibkan saxiixida heshiis cusub.
Wargeyska “Evening Standard” ee dalka England ayaa wuxuu sheegay in wakiilada De Gea ay wali ku adkeesanayaan in loo ogolaado mushaar todobaadle ah ee gaarsiisan 400 kun ginni, si uu heshiis cusub ugu saxiixo Manchester United.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in maamulka kooxda Manchester United ay diyaar ula yihiin goolhaayaha reer Spain ee David de Gea mushaar todobaadle ah ee gaarsiisan € 350,000, si uu u noqdo goolhaayaha ugu mushaarka badan aduunka, balse waxay diideen inuu noqdo ciyaaryahanka ugu mushaarka badan kooxda.
Ilo xog ogaal ah ayaa waxay sheegeen in David de Gea uu ka balan qaaday maamulka kooxda Manchester United, inuu ku qaadan doono sanadaha ugu fiican ee xirfadiisa kubadda cagta garoonka Old Trafford, waa hadii uu ka helayo mushahar u rumeyn kara riyooyinkiisa.